စိတ်ရှည်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စိတ်ရှည်ပါ
Posted by Mr WorldWide on Jun 21, 2013 in Creative Writing, Think Different | 10 comments
တယောပညာရှင်ကြီး ဖရစ်ဇ် ခရစ်စလာရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု ပြီးတဲ့အခါ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက သူ့ဆီ ချဉ်းကပ်ပြီး “ မစ္စတာ ခရစ်စလာ ၊ ရှင်တယော ထိုးတက်သလို ကျွန်မထိုးတက်မယ် ဆိုရင် ကျွန်မရဲ့ ဘ၀ကို ပေးဆပ်ပ့ါမယ် ” လို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ တယောပညာရှင်ကြီးက လှည့်ပြီး ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ပြောလိုက်ပုံက
“ ဟုတ်တယ် ၊ ကျွန်တော့်ဘ၀ကိုလည်း ပေးဆပ်ခဲ့ရတယ် ” တဲ့။
ကျွန်တော်တို့ တခုခုမှာ တော်ချင်တယ် ဆိုရင် ဘ၀တလျှောက်လုံး လေ့ကျင့်ဖို့ လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှ မဟုတ် ဆယ်နှစ် ၊ ဒါမှ မဟုတ် အနည်းဆုံး ၆ လပေ့ါ။ ဒါကို လူတော်တော် များများ ကလည်း သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဘယ်အရာမဆို အောင်မြင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အချိန်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ် မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် လူတော်တော် များများကတော့ ဥုံဖွ ချက်ချက်း ဖြစ်ချင်ကြတယ်။ ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်သလဲ ၊ ဘာဖြစ်ချင်သလဲ ။ ဖြစ်ချင်တာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ လုပ်ချင်တာကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်ဖို့အတွက် ၊ ကျွမ်းကျင်ဖို့ အတွက် ရည်ရွယ်ရင် သူ့အတွက် နေ့စဉ် အချိန်ပေးပါ။ ဒါပေမယ့် နေ့တိုင်း တိုးတက်မှု ရှိလိမ့်မယ်လို့တော့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။
– ဘာသာစကားတစ်ခု တက်မြောက်အောင်
အစရှိသည်ဖြင့်ပေ့ါ။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခု စတယ်ဆိုရင် အချိန်လုံလောက်စွာ ပေးပါ။ နေ့စဉ်လုပ်မယ့် အစီအစဉ် ဇယားဆွဲပြီး တိုးတက်အောင် အချိန်ပေး လေ့ကျင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံး
“ လူတော်တော် များများက စိတ်မရှည်ပဲ စောစောစီးစီး ရပ်ပစ်တက်ကြတယ် ”
Author – Andrew Matthews
“ လူတော်တော် များများက စိတ်မရှည်ပဲ စောစောစီးစီး ရပ်ပစ်တက်ကြတယ် ” ဆိုပဲ ..
ဖတ်ပြီးသည့် သကာလ မိမိကိုယ်ကိုယ်လ် အရင်ဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်ဦးမှပဲ…….
စိတ် ရှည် သည်း ခံ လမ်း ကြောင်း မှန်
ဘာမှတော့ ဆိုင်ဘူးပေါ့ ။
စိတ် မရှည် တဲ့ ရွှေတူးအဖွဲ့ရွှေ မ တွေ့ ဘူးဆိုပြီး စိတ် မရှည် ပဲ ရပ် လိုက်တယ်။
နောက် ထပ် ရွှေတူးတဲ့ အဖွဲ့ က တူးလက် စ ကို ဆက်တူး တဲ့အခါ
ပထမ အဖွဲ ရပ်သွားတဲ့နေရာက နေ နောက်ထပ် တစ်မီတာ လောက် ပဲ တူးလိုက် ရုံနဲ့
ရွှေ ကြော ကြီးကို တွေ့ သွားတယ် တဲ့
စိတ် မရှည် တဲ့ ပထမ အဖွဲ့အရမ်း နစ်နာ သွားတာပေါ့
အဲဒိ အဖြစ်လေးကို ဖတ်ဖူးတယ်
အောင်မြင်မှုရနေတဲ့သူကို ကြည့်ပြီး အားကျပြီး သူ့လိုအောင်မြင်မှုရချင်ပေမယ့်….
သူလျှောက်လှမ်းခဲ့ရတဲ့လမ်းကိုတော့ အားမကျတတ်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။
အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာ အားထုတ်မှုမရှိပဲ အလကားတော့ မရဘူး။
စိတ်ကပဲရှည်လွန်းးနေသလား့းအချိန်တွေကပဲ သွားးနေတာမြန်လွန်းးသလားးးတောင် မတိတော့ပါဝူးးးးးး
(လမ်းခုလဒ် ရောက်နေတဲ့ ထဲက တစ်ယောက် )
ခန္ဓီစ .. သည်းခံခြင်းသည် မြတ်၏ ……… တဲ့ …
မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော် မူခဲ့တာပါ …
သည်းခံခြင်းမှာ စိတ်ရှည်ခြင်း ပါပါတယ် ….
မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ ကမ္ဘာ့ အကြီးကျယ်ဆုံး ဖီလိုဆိုဖာကြီးပါ …..။
စိ တ် ရှ ည် ရ င် နိ ဗိာ နရော က် သ တဲ့ ၊